मेयरले हाने लेखा अधिकृतलाई २ झापड ! - Everest Dainik - News from Nepal
मेयरले हाने लेखा अधिकृतलाई २ झापड !
महोत्तरी, असोज १२ । जिल्लाको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव साहले हिसाबकिताब नदिएको भन्दै आफ्नै कार्यालयका लेखा अधिकृत पवनकुमार अधिकारीलाई बुधबार कुटपिट गरेका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले मेयरलाई कारबाही गर्न बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विवाह गरेको २५ वर्ष हुँदासम्म नागरिकताविहीन
मेयर साहले भने गत आर्थिक वर्षको हिसाब पटक-पटक माग गर्दा पनि लेखा अधिकृतले नदिएको बताए । उनले भने, ‘बुधबार दुईजना वडाध्यक्ष तथा केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसमेत राखी उहाँलाई गत आर्थिक वर्षका हिसाब पारदर्शी गर्न आग्रह गर्दा अपशब्द प्रयोग गर्नुभयो, अनि मैले दुई झापड हानेको हुँ ।’ उनकै कारणले नगरपालिकाको खातासमेत रोक्का रहेको मेयर साहको दाबी छ ।
प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले ट्रेड युनियनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि नियमानुसार गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई निर्देशन दिएका छन् । ढकालले घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाई नियममा जे छ सोहीबमोजिम गर्न-गराउन निर्देशन दिएको बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: mahottari, sanjib shah, भंगहा नगरपालिका